USimona-ndiza kuqokelela umkhosi wam-ukubala ukuya eBukumkanini
USimona-Ndiza kuqokelela umkhosi wam
Inenekazi lethu leZaro ukuba	Simona Epreli 26, 2020:
Ndabona iNenekazi lethu leFatima: bonke babenxibe ezimhlophe, imiphetho yengubo yakhe igolide, entlokweni yakhe yayiligqubuthelo elimhlophe nesithsaba sokumkanikazi; ingubo ende emhlophe yayihamba ivela emagxeni akhe iye ezinyaweni zakhe. Umama waye izandla zakhe zisongelwe emthandazweni kwaye phakathi kwazo kukho irosari engcwele eyenziwe ngeeperile. Ngamana uYesu Kristu angadunyiswa!
Bantwana bam abathandekayo, yomelelani, uxolo, uxolo; qhubeka uqinile emthandazweni. Ungayilahli iiSakramenti eNgcwele, hlalani rhoqo emthandazweni. Bantwana bam abathandekayo, thandazani, thandazelani lonke uluntu, thandazelani eli lizwe lonzakele emzimbeni nasemoyeni. Lonke uluntu luyagula; Iyabandezeleka, kwaye olona nyango luphela nguKristu Yesu: kuphela kuye kunethemba, uxolo, uthando, amandla. Bantwana bam, musani ukufulathela, musani ukuba lusizi, musani ukuqhiphuka umbilini, jikani kuYesu wam endimthandayo kwaye akazulibazisa ukuza kuninceda. Ndiyanithanda, bantwana bam, ndiyanithanda ngokunothando olukhulu, ndingumamakho kwaye ndihlala ecaleni kwenu. Bantwana bam, thandazani, thandazelani neCawe yam endiyithandayo kula maxesha amnyama, thandazela iVicar of Christ ukuba ithathe izigqibo ezifanelekileyo. Bantwana bam, ububi bujikeleze iBandla lam eliyintanda: thandazani, bantwana, thandazani.
Bantwana bam abathandekayo, ndiyanithanda kwaye ndibuyela kuni ngenceba enkulu kaBawo, onothando olunothando olukhulu. Ndiza ukuhlanganisa umkhosi wam. Yibani nilungile, bantwana bam, yomelele niqinile elukholweni. Ndiyanithanda, bantwana.
Ngoku ndikunika intsikelelo yam engcwele. Enkosi ngokungxama kum.
← Luz de Maria - Yazisa…
UAngela-Ngamana uBomi baKho bube nguMthandazo →